အံကပ်စိုက်ရသူတွေ သိဖို့ . . . – Healthy Life Journal
အံကပ်စိုက်ရသူတွေ သိဖို့ . . .
Posted on စကျတငျဘာ 10, 2019
မေး ။ အံကပ်စိုက်ရတဲ့ သူတွေအနေနဲ့ အံကပ်ကို ရေရှည်ထိန်းသိမ်းနိုင်ဖို့နဲ့ ခံတွင်းသန့်ရှင်းနေဖို့အတွက် ဘယ်လို ထိန်းသိမ်းသင့်ပါသလဲ။
သွားနှင့် ခံတွင်းဘက်ဆိုင်ရာ ဆရာဝန်ကြီးတစ်ဦး မှ ပြန်လည်ဖြေကြားသည်။
အံကပ်တပ်ဆင်သူတွေအနေနဲ့ အစာစားပြီးတိုင်း အံကပ်ကို ဖြုတ်ပြီး ရေနဲ့ ဆေးကြောပေးပါ။ ညအိပ်ရာဝင်ခါနီးတိုင်း အံကပ်ကို ဖြုတ်ပြီး သွားတိုက်ဆေး ဒါမှမဟုတ် ဆပ်ပြာနဲ့ တိုက်ပြီး ရေနဲ့ သေချာ ဆေးကြောသန့်စင်ပေးပါ။ ပြီးရင် အံကပ်ကို ရေထဲစိမ်ပါ။ ရိုးရိုးရေထဲစိမ်ပြီး အဖုံးဖုံးထားပေးပါ။
နံနက်အိပ်ရာထပြီး ခံတွင်းသန့်ရှင်းရေး လုပ်ဆောင်ပြီးချိန်မှာ အံကပ်ကို သွားတိုက်ဆေး ဒါမှမဟုတ် ဆပ်ပြာနဲ့ သွားတိုက်တံနဲ့ သေချာတိုက်ပြီးမှ ပြန်သုံးသင့်ပါတယ်။ အံကပ်မှာ စားကြွင်းစားကျန်တွေ ကပ်ငြိမနေအောင်ထားဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။ သွားပစ္စည်းရောင်းတဲ့ ဆေးဆိုင်တွေက ၀ယ်လို့ရတဲ့ အံကပ်စိမ်တဲ့ ဆေးပြားနဲ့ စိမ်ပေးရင် ပိုကောင်းပါတယ်။
Related Items:Dental, Dental Care, dentures